LinkedIn Mapoka Ekutengesa Kubudirira | Martech Zone
LinkedIn Mapoka Ekutengesa Kubudirira
Mugovera, Kukadzi 22, 2014 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn yakagara iri sosi yakasimba yebhizinesi kune vebhizimusi vatengesi uye madhipatimendi ekutengesa kuti vawane nekubatana netarisiro yavo nevatengi. Ichowo chikuva chikuru chekusanganisira mune ako marongero maitiro Zano redu rave rakagara riri revatengesi uye vezvekushambadzira kuti vave kune vateereri… vateereri vanogona kuwanikwa pairi LinkedIn Mapoka.
LinkedIn Mapoka anopa nzvimbo yevanamazvikokota muindasitiri imwe chete kana nezvido zvakafanana zvekugovana zvirimo, kuwana mhinduro, kutumira uye kuona mabasa, kuita vanobatana navo bhizinesi, uye kuzvimisikidza sehunyanzvi hweindasitiri. Iwe unogona kuwana mapoka ekubatana nekushandisa iyo yekutsvaga ficha pamusoro peji rako rekutanga kana kutarisa mazano emapoka aungade. Iwe unogona zvakare kugadzira iro idzva boka rinotarisana pane imwe nhaurwa kana indasitiri.
Iyi infographic inotsanangudza kuti maLinkedIn Mapoka anogona sei kuita chombo chako chakavanzika chekubudirira kwekutengesa!
Tags: b2bbhizinesi kune bhizinesiLinkedIndzakabatana mapoka
Kufanotaura kwa2014 kweMafoni Webhu Maitiro
Zvekubatana: Kwirisa Yako Network ROI
Batanidza Worx Seo
Kukadzi 24, 2014 na5: 11 PM
Yakanaka post Doug, Iwe wakaisa pamwechete huru [infographic]. Imwe nharaunda yandiri pamusoro pekutarisa chikamu chechimiro. Iko iripi chaizvo iko?
Mar 18, 2014 pa 6: 37 AM
Great Blog ,,, yakabatanidzwa-mukutamba inoita basa rakakosha mukuvaka hukama nevatengi uye hurukuro yeboka pamusoro pezvinhu zvakasiyana.
Mar 18, 2014 pa 6: 45 AM
Bvumiranai pamusoro penyu..zvizhinji zvinotungamira zvakakosha kune ese mabhizimusi ekuvandudza manejimendi ekuvandudza sangano uye zvakabatana-mukati zvichavabatsira mijenya yavo isu tinogona kuwana akasiyana bhizinesi nyanzvi ivo vanozotaurirana navo uye kusimudzira zvigadzirwa zvebhizinesi.